အီရတ်နိုင်ငံ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဆေးရုံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် မီးလောင်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၉၂)ဦးအထိ မြင့်တက်လာ - Xinhua News Agency
အီရတ်နိုင်ငံ al-Nasiriyahမြို့ရှိ မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် al-Hussein ဆေးရုံ ကွာရန်တင်းစင်တာအား ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘဂ္ဂဒက်၊ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Dhi Qar ပြည်နယ်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဆေးရုံတစ်ခုတွင် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က ဖြစ်ပွားသည့် မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှု‌ကြောင့် သေဆုံးသူ (၉၂)ဦးအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း အီရတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီ (INA)က ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အစိုးရက အဆင့်မြင့်ကော်မတီဖွဲ့၍ အချင်းဖြစ်ရပ်ကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရလဒ်ကို ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mustafa al-Kadhimiက ယင်းနေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပုံမှန်အစိုးရအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ဧပြီလက ဘဂ္ဂဒက်မြို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဆေးရုံတွင် မီးလောင်မှုကြောင့် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ထားသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Hassan al-Tamimiနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်သူအမည်စာရင်းကို အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ al-Nasiriyahမြို့ al-Hussein ဆေးရုံ ကွာရန်တင်းစင်တာအတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့သည့်လူနာကုတင်အား ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
Dhi Qarပြည်နယ် မြို့တော် al-Nasiriyah၌ တည်ရှိသည့် al-Hussein ဆေးရုံသည် ကိုဗစ်ကွာရန်တင်းစင်တာတွင် ဇူလိုင် ၁၂ ရက် ညပိုင်းက မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကိုဗစ်လူနာဆောင်ရှိ အောက်စီဂျင်အိုးပေါက်ကွဲရာမှ မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကနဦး စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ al-Nasiriyahမြို့ al-Hussein ဆေးရုံ ကွာရန်တင်းစင်တာအတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့သည့်ခန်းမအား ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အချင်းဖြစ်ရပ်သည် အီရတ်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဆေးရုံ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဧပြီ ၂၄ ရက်က မြို့တော်ဘဂ္ဂဒက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဆေးရုံတစ်ခုတွင် အောက်စီဂျင်အိုးပေါက်ကွဲပြီး မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် လူ (၈၂)ဦး သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာသူ(၁၁၀)ဦး ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
1. Photo taken on July 13, 2021 shows the charred hall of the quarantine center at al-Hussein Hospital hit byabig fire in al-Nasiriyah, Iraq. (Xinhua)
2. Photo taken on July 13, 2021 showsacharred bed at the quarantine center at al-Hussein Hospital in al-Nasiriyah, Iraq. (Xinhua)
3. Photo taken on July 13, 2021 shows the inside of the charred hall of the quarantine center at al-Hussein Hospital in al-Nasiriyah, Iraq. (Xinhua)
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစား ရောနှောထိုးနှံခြင်း မပြုကြဖို့ WHO အရာရှိက သတိပေး